Alshabaab oo bogaadiyey askarigii Gaalkacyo ku dilay labo shaqaale reer Galbeeda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Alshabaab oo bogaadiyey askarigii Gaalkacyo ku dilay labo shaqaale reer Galbeeda
Muqdisho – Mareeg.com: Alshabaab ayaa caddeeyey iney ku faraxsan yihiin dilkii maanta askari ka tirsan ciidamada Puntland uu labo shaqaale ajnabi ah oo u kala dhashay Ingiriiska iyo Faransiiska ugu geystay magaalada Gaalkacyo.
Alshabaab ma sheegan iney dilkaas ku lug lahaayeen, hase ahaatee waxey muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin.
Afhayeenka Alshabaab, Sheekh Cali Dheere oo lahadlay warbaahinta Alshabaab ayaa sheegay iney ku faraxsanyihiin in saraakiil caddaan ah oo Qarmada Midoobay katirsan qudha looga jaro bartamaha Soomaaliya.
“Weerarka ka dhacay Gaalkacyo waan soo dhaweynaynaa, in gaalo caddaan ah oo dalkeena kusoo duushay la dilo qof walba oo Muslim ah waa ku farxayaa” ayuu yiri Sheekh Cali Dheere.
Wuxuu sheegay in tallaabada uu qaaday qofka toogashada ugeystay saraakiisha u dhalatay wadamada Ingiriiska iyo Faransiiska ay aheyd mid wanaagsan oo mudan in lagu daydo, sida uu yiri.
“Waan ku faraxsannahay caddaanka la dilay sababtoo ah nimanka la dilay ee dalalkoodu Soomaaliya kusoo duuleen waa u qalmeen in weerar noocaasi ah lagu qaado oo nolosha ladhaafiyo” ayuu sidoo kale yiri afhayeenka Alshabaab.
Afhayeenka Alshabaab ayaa sheegay in qof kasta ee Soomaali ee sameeya falkii maanta ka dhacay Gaalkacyo oo kale ay bogaadinayaan.
“Qof walba oo Soomaali ah ee gaalada nagusoo duushay tallaab ka qaada ee cadkiisa ka goosta waxa uu doono ha ahaadee bogaadin baan udiraynaa” ayuu yiri afhayeenka Alshabaab, Sheekh Cali Dheere.
Cali Dheere ayaa Qaramada Midoobay ku eedeeyey iney cadowga Soomaaliya u xalaaleeyeen iney qabsadaan dalka, wuxuuna shacabka ugu baaqay iney ka aargoostaan Qaramada Midoobay, sida uu hadalka u dhigay.
“Shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in ay ka aargoostaan gaalada Qaramada Midoobay, kuwa dalkiina duullaanka usoo horseeday waa iyaga oo cadawgii umadda ayay u sharciyeeyeen in ay qabsadaan dalkeenna” ayuu sidoo kale yiri Cali Dheere.
Maanta oo ah (7-4-2014) ayaa waxaa askari ka tirsan ilaalada garoonka diyaaraha Gaalkacyo wuxuu toogasho ulakac ah ku dilay labo shaqaale ajnabi oo u kala dhashay Ingiriiska iyo Faransiiska, una shaqeynayay hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan ka hortgga daroogada iyo dambiyada ee UNODC.
Hiiraan adminsitration reopen main roads in the region